चन्द्रागिरीको यात्रा, हाँडी गाउँको जात्रा! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, भदौ १३, २०७८ मा प्रकाशित
लु है काका ! सण्डे र म त काँ जाउँ काँ जाउँ जस्तो भएर यतै पो आयौं । चिया पसलमा पनि अब खासै कुरा हुन छाडी हाल्यो । त्यहाँ त माधव नेपाल जस्तो फुस्रो भर पो बस्न थालेछन्।
के भन्छ यो भिरघरे ! माधव नेपाल किन फुस्रो छन् र! उभिण्डेको सण्डेले माधव गुट छोड्यो भन्दैमा फुस्रो हुने खालका होइनन् माधव। माधव भनेका अब हामी माओवादीका पनि जाज्वल्यैमान नेता हुन् । हाम्रो राष्ट्रनायक, महान क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गका सर्वकालीन अध्यक्ष काम्रेड प्रचण्डले माधवलाई स्वर्ग पु¥याई दिन्छन्। कि कसो सण्डे!
हो काका! अस्ति चन्द्रागिरीसम्म लगेछन्। अब स्वर्गसम्म पु¥याउँछन् होला! गुटुङटुङ पारेर चन्द्रागिरी नलगेको भए दश प्रतिशत पनि पुग्थेन क्यारे। धन्न माथि लगेर थुनेन भने २० प्रतिशत पुग्दैन भनेर कुन चाहिँले बुद्धि दिएछ । नत्र चन्द्रागिरीको यात्रा, हाँडीगाउँको जात्रा हुने पो रछ।
प्रचण्डले दिए होलानि! माधवलाई पनि थाहा थियो होला अन्तिममा चिलिम हुन्छु भन्ने कुरा। तेस्रो र चौथो पुस्तामा विश्वास छ भन्दै थिए तर माधव नेपाललाई अन्तिममा भ्यागुतो पारे। अष्टलक्ष्मी, भीम आचार्य जस्ताले छाडेपछि अरुको कुरा!
तिनारु एक महिने मुख्यमन्त्री बन्न गाका हुन क्या भिरघरे। हेर्दै जा… बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे र एक नम्बरमा राजेन्द्र राई मुख्य मन्त्री बन्छन् । सबै तयार भै सकेका छन् । १ नम्बरमा प्रदेश प्रमुख फेर्नलाई ढिला भर मात्र हो नत्र हाम्रो सभामुख काम्रेड अग्नीले जस्तै अल्झाको छ अल्झाको छ गरेर रोक्न सकिन्थ्यो!
कति रोक्छौ र काका! आखिर हाम्रो काँग्रेसले चुनाव गराउँछ । चुनाव नभएसम्म हामी प्रचण्डको पार्टी, माधवको पार्टी, महन्थ र उपेन्द्रको पार्टी घिसार्छौं। चुनावको मिति घोषणा भएपछि कम्मर कसेर एमालेसंग चुनाव लड्न एक्लै मैदानमा काँग्रेस हिँड्ने छ ।
हेर भिरघरे! हामीलाई कसैले बोक्नु पर्दैन। चुनावसम्ममा हाम्रो विशाल पार्टी बन्छ। प्रचण्ड काम्रेडले भनेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी हाम्रै हुने भयो। तिमारु काँग्रेसलाई एमाले नै ठूलो लाग्छ भने लागि रहोस्। माधव नेपाल गुट एमालेबाट चोइटियो, अब चुनापमा कांग्रेस एक्लै लडेर एमालेलाई पछार्छ’ भनेर काँग्रेसकाहरु नै हल्ला गर्दै हिडेका छन्। जसले साथ दियो उसको वास्तै नगर्ने काँंग्रेसहरु काम लाग्दैनन्। हामीले बुझेको छ!
हौ काका तिम्रो नाम त्यसै विध्वांसे राखेको होइन। माधवजीले एमाले मैले बनाएको, खासमा एमालेको एक मात्र नेता मै हो भनेर मात्र हुने होइन । कार्यकर्ता राख्न पनि सक्नु प¥यो । सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, वामदेव गौतम, केपी ओली, विद्या भण्डारी लगायतलाई माधवजीले पार्टीमा टिक्न नदिएको इतिहास आलै छ। अनि अहिले आएर दोस्रो पुस्ताको मलाई भर छैन, यिनारु प्रतिक्रान्तिको मतियार भए भनेर भट्याउँदैमा हुन्छ र!
वाइयात कुुरो गर्दो रछ यो सण्डे पनि। तैले राजनीति के बुझेको छर! घनश्याम लगायतका नौ जाना ओलीले बोलाएपछि ‘हामी पार्टी विभाजनको विपक्षमा’ भन्दै हिड्नै नहुने । माधवलाई अलपत्र पार्ने नै यिनै हुन । पहिला उचाल्नुसम्म उचाले अहिले ढुङ्गमा थेचारे। तँ मुलाङ त माधवलाई छाडेर ओलीतिर गइस्। तेरो के कुरो गर्नु!
हौ काका ! चाहे झापाका नरेश खरेल भन चाहे हाम्रा भीम रावल भन सप्पै ओलीतिरै छन् त! माधवतिर गएकाहरु केही दिनमा आफू त आफ्नै घर फिर्किएर आइयो भन्दै आउने छन्। पहिला हाम्रो कांग्रेस फुटाउने देउवा दाइ र एमाले फुटाउने वामदेव कांम्रेडको गति के भयो? तिमीले बिर्सियौ?
हेर्लास् भिरघरे ! काठमाडौंबाट प्रदेश सभासद भएका दुई जना माधवतिर आई सके। उता १ नम्बर प्रदेशका प्रदेश सांसद पनि फर्किदैछन् ।
संखुवासभाका दुइटी महिला सांसदलाई जे भन्यो तै दिने भनेर हामीले मनाई सक्यौं । अनि बागमती र १ नम्बर प्रदेशका एक महिने मुख्यमन्त्रीले देख्ने छन् तिरिमिरी झ्याँई!
के भन्छन् यी बुढा ! कल्ले तिरिमिरी झ्याँई देख्ने ? तिमारु माओवादीले फकाएर माधव नेपाललाई तिरिमिरी झ्याँई देखाई हाल्यौनी! चन्द्रागिरी लगेर आफ्ना कार्यकर्ता नथृुनेको भए १५% पनि…!
यो झुम्री त्यसै जान्ने हुन्छे ! चन्द्रगिरीमा रमाइलो गर्छन्, खान्तेपिन्ते हुन्छ, भाग्न पाउँदैनन् भनेर लगेको हो। नगएर ओलीतिरै बस्नेहरु अहिले थक्क–थक्क गर्दैन्। माधवजी भनेको महान अग्रगामी नेता हुन्! नभए नेपाली काँग्रेसको सभापति, प्रगतिशील व्यक्तित्व, प्राडो–पजेरो, वाइडबडी विरोधी सबैका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो पार्टी नै समाप्त पार्ने कलंकित व्यक्ति बन्ने नै थिएनन् । कि कसो भिरघरे ।
हो काका! कहिले काँही त राम्रै खुस्केट कुरा गर्छौ। हाम्रो देउवा दाईको प्रशंसा गरे जस्तो गरेर सत्य कुरा ओकली हाल्यो । अब तिमार्को काम दुईवटा बाँकी छ। एउटा हाम्रो काँग्रेस फुटाई दिने, अर्को बागमती र १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट एमालेका दुवैलाई हटाउने!
तैले ठिकै भनिस् भिरघरे ! हामी हाम्रो उद्देश्यमा अहिलेसम्म सफल हुँदै आएका छौं । प्रदेश सांसदलाई पैसा र पद दिने हो, त्यो हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले मात्रै दिन सक्छन्। अरुका गफ प्रचण्डका काम। हेर्दै जा! २१ दिनको म्याद दिएर अध्यादेश त्यसै जारी गरेको होइन। उच्च छलाङ मार्दै अग्रगमनका लागि नै हो।
लौ विध्वसें काका! तिम्रो कुरा सुन्दा त माओवादी समाप्त नभएसम्म न स्थायित्व कामय हुन्छ न त शान्ति हुन्छ भन्ने प्रष्ट भयो । तिमार्को यो पाखण्डी यात्रा रोक्न सक्ने नेपालमा एकजना ओली मात्र रछन् ।
मेरो कन्सीरी तात्ने कुरा नगर सण्डे कान्छा। तँ र झुम्री ओलीको भक्त भएका छौ। तिमार्को केही विश्वास छैन। दुईचार दिनमा देख्ने छौ प्रदेश र केन्द्रमा हाम्रो माधव काम्रेडतिर आउनेको लर्को!
पद र पैसा बाँड्न सक्ने सर्वहारा वर्गका महान नेताले एमालेका केही प्रदेश सांसद तान्न सक्छन् । यसमा दुई मत छैन । तर, कार्यकर्ता नेता र जनता चैं तिम्रो माधवतिर जाने देखिदै । माधवबाट केही हुनेवाला छैन । लौ सण्डे अब हामी लाग्यौ घरतिर ! काका–काकी,